အခမဲ့ Forex နေရင်မြန်အောင် - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex နေရင်မြန်အောင်
မှတ်ချက်: အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့် Register နှင့် 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်သရုပ်ပြမုဒ်၌ဤဝန်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်!
MyDigiTrade - 250 + အခမဲ့ Forex နေရင်မြန်အောင်နှင့်အတူအကောင်းဆုံး Copy ကူးထရေးဒင်းပလက်ဖောင်း
MyDigiTrade ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း copy လာဘ်လူကြိုက်များတစ်ဦးချင်းစီနှင့်နေ့တိုင်းနှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကုန်သည်များအတူတကွတတ်၏။ သငျသညျအခြို့သောအနေဖြင့်ရလဒ်တွေကိုရယူနိုင်သည် အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများ အကြား တစ်လလျှင် 5-15% (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကောင့်ကုန်သွယ်) ။
၏အယူအဆ မိတ္တူကုန်သွယ် တစ်လေ့လာသူကုန်သည်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ, အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကို select သူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုချိတ်ဆက်နှင့်၎င်းတို့၏ကူးယူစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည် အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများ သူသို့မဟုတ်သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစ်ကျအကောင့်သို့အလိုအလျောက် mode မှာ။
အကျိုးဆက်တစ်ခုကုန်သည် (မဟာဗျူဟာ provider က) သူသို့မဟုတ်သူမ၏အကောင့်အပေါ်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်သောအခါ, တစ်ဦးတူညီကုန်သွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ (မဟာဗျူဟာနောက်လိုက်များ) အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ မိတ္တူကုန်သည်ဆော့ဖျဝဲ သငျသညျထိပ်တန်းကုန်သည်များကူးယူပြီးအတော်ကြာမဟာဗျူဟာပံ့ပိုးပေးတို့တွင်ရန်ပုံငွေချထားပေးခြင်းအားဖြင့်သင့်အန္တရာယ်မျိုးစုံမှခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, သင်မဟာဗျူဟာပံ့ပိုးပေးဒါမှမဟုတ်တချို့သည်အခြားသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၏တဦးတည်းကိုသင်အမြတ်မျှော်မှန်းထားသည်လိုက်လျောမည်မဟုတ်ကြောင်းအမှု၌သင်တို့၏ဆုံးရှုံးမှုနိုင်ပါတယ်န့်သတ်ရန်။
Forex မိတ္တူကုန်သွယ် ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရအမြတ်အစွန်းအောင်ကိုစတင်မဆိုအစပြုဖွကြောင်းအွန်လိုင်းကုန်သွယ်အတွက်တိုးတက်သောလမ်းကြောင်းသစ်သည်!
အတူအများစုမှာမှတ်သားဖွယ် MyDigiTrade သင်သည်မည်သည့် plugins ကိုနှင့်ငှားတစ်ဦးကိုထည့်သွင်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး Forex VPS သင့်ရဲ့ Metatrader4(MT4) ပလက်ဖောင်းဆာဗာကို။ MDT ၎င်းတို့၏ server များပေါ်တွင်တည်ခင်းဧည်အပြည့်အဝ automated မိတ္တူကုန်သွယ်နည်းပညာကမ်းလှမ်း!
အဆိုပါ FinTech ကုမ္ပဏီ - MyDigiTrade အကြောင်း
MyDigiTrade (MDT) လွတ်လပ်သောကုန်သည်အုပ်စုတစ်စုအားဖြင့် 2010 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ဒီနေ့အရှိဆုံး State-Of-The-Art တကူးယူဘို့ဆန်းသစ်နှင့်အစွမ်းထက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည် 250 + အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများ ဦးဆောင်ကုန်သည်များကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သူတို့ရဲ့ client များအကြားဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်ကုန်သည်များ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်စည်းစိမ်သည်စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီတွေရှိပါတယ်။ အဆိုပါမစ်ရှင်ကိုအကောင်းဆုံးကုန်သည်များကိုရှာဖွေနှင့်သူတို့၏အရောင်းအကော်ပီကူးရန်သင့်အား enable ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်အရာကိုသင်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ခြင်းခံရသောအခါအဘို့အကြည့်ဖို့ Forex signal ကိုပံ့ပိုးပေး သင့်ရဲ့အစုစုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏အရွယ်အစားပေါ်မှာအများကြီးအရေးပါပါတယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအများစုမှာတစ်ဦးရှာနေပါတယ် တည်ငြိမ်နည်းဗျူဟာ ကြောင်းအကြားထုတ်ပေး တစ်လလျှင် 5-10% ။ ဒါကချွန်ထက် drawdown အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 300% ၏အမြတ်အစွန်းရတဲ့နှင့်ထူးဆန်းထက်ပိုအရေးကြီးပါသည်။
At MyDigiTrade အားလုံး signal ကိုပံ့ပိုးပေးအကောင့်အမြတ်အစွန်း, မတည်ငြိမ်မှု, ရင့်ကျက်, drawdowns အကြိမ်ရေနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလသို့ယူသောစီးပွားဖြစ် algorithm ကိုအပေါ်ကိုအခြေခံပြီးအဆင့်နေကြသည်။ အကောင်းဆုံးအန္တရာယ် / ဆုလာဘ်အချိုးအစားနှင့်အတူမဟာဗျူဟာပထမဦးဆုံးစာရင်းဝင်နေကြသည်။
MDT (ကပြင်ဆင်ချက်ငွေပမာဏသို့မဟုတ်သင့်စုစုပေါင်းလက်ကျန်ငွေတစ်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နိုင်သည်) နောက်လိုက်တစ်ဦးနည်းဗျူဟာမှအစုစုကိုသာတစိတ်တပိုင်းခွဲဝေချထားပေးရန်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်ကိုလိုက်နာလိုသောအားလုံးမဟာဗျူဟာအကြားဘဏ္ဍာရေးဖြန့်ဝေဖို့ဘယ်လိုသေချာမသိကြပါလျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wizard ကိုသင်ရွေးချယ်ထားသောမဟာဗျူဟာ၏အန္တရာယ်နှင့်အမြတ်အစွန်းကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်အလိုအလျှောက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
MyDigiTrade သငျသညျအတှေ့အကွုံကင်းမဲ့နှင့်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များတွင်ကြေးစားကုန်သည်များ '' ဝင်ငွေတူညီကြောင်းအမြတ်အစွန်းအောင်မြင်ရန်ချင်လျှင်, အသင်လိုအပ်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ သငျသညျလိုအပျသောအတှေ့အကွုံရရှိခဲ့နှင့်အမျိုးမျိုးသောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများအကြားကသူတို့ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းအားဖြင့်သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမျိုးစုံချင်လျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, MDT, သင်လိုအပ်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။
250 + အခမဲ့ Forex နေရင်မြန်အောင်နှင့်အတူအကောင်းဆုံး Copy ကူးထရေးဒင်းပလက်ဖောင်း - MyDigiTrade အကြောင်းကပိုအချက်အလက်
MyDigiTrade ကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့် operated ဖြစ်ပါတယ် Larmond မြို့တော်, Ltd ကြောင်းရှာဖွေနေနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကုန်သည်များငှားရမ်းသည်။ ရှိပါတယ် 200 + ကုန်သည်များမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုထက်ပို မဟာဗျူဟာပံ့ပိုးပေးအကြား။ သူတို့ထဲကတချို့ကလက်စွဲစာအုပ် mode မှာကုန်သွယ်မှု။ အခြားသူများကမူထူးခြားတဲ့ algorithms အပေါ်အခြေခံပြီးကုန်သွယ်စက်ရုပ်ဖွံ့ဖြိုး။
ကုန်သည်ကြီးများ '' အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပိုမိုမြန်ဆန်ကမ္ဘာ့အများဆုံးပါရမီကုန်သည်များရှာတွေ့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အမြတ်အစွန်းနှင့်အန္တရာယ်များ: အဆိုပါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုထိပ်တန်းအရေးကြီးသောညွှန်းကိန်းအပေါ်အခြေခံသည်။ သငျသညျအမြိုးမြိုး filter များသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစံများကကုန်သည်များခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
default အတွင်, အားလုံးကုန်သည်များအနေနဲ့သီးသန့် algorithm ကိုအပေါ် အခြေခံ. အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်ခွဲခြားထားပါသည်။ MDT Rank ကုန်သည်များ '' ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးအားခွဲခြားစိတ်ဖြာတို့ကိုအကဲဖြတ်ခွင့်ပြုသည့်အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါအကဲဖြတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချများအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအချက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သငျသညျကြိုးစားနိုင် MyDigiTrade အမှန်တကယ်ငွေချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ Forex အချက်ပြမှုများဝန်ဆောင်မှုကအကောင့် - ပလက်ဖောင်း Forex signal ကိုသရုပ်ပြအကောင့်ခွင့်ပြုပါတယ်။ Forex signal ကိုသရုပ်ပြဟာအဆက်မပြတ်စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ထံမှအခမဲ့အွန်လိုင်း Forex အချက်ပြမှုများရှိမရှိသင်တက်စစျဆေးနှင့်အသငျသညျအစိုင်အခဲ passive ဝင်ငွေ generate ကိုကူညီမယ့်အဆင်ပြေနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အများဆုံးရှုထောင့်ကကုန်သည်တွေကို Select လုပ်ပါနှင့်သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကို၎င်းတို့၏မဟာဗျူဟာများထည့်ပါ။ Start ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်အရစ်ကျအကောင့်ထဲမှာအလိုအလျှောက်သူတို့ရဲ့အရောင်းအပုံတူပွား။ autopilot အပေါ်ငွေရှာ!
ငါတို့သည်သင်တို့အအောင်မြင်ဆုံးနည်းဗျူဟာပံ့ပိုးပေးရွေးချယ်ရာတွင်သို့မဟုတ်သင့်သရုပ်ပြအကောင့်မှာသူတို့ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်တွင်, သင်သည်တစ်ခုအရစ်ကျအကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် MDT ပလက်ဖောင်းကချိတ်ဆက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
200 + TOP Forex Signal ပေးသူများထဲတွင်ကို Select လုပ်ပါပြီးတော့အခမဲ့များအတွက်သင့်ရီးရဲလ်အချိန် Demo စမ်းကြည့်ပါ!
MyDigiTrade Copy ကူးထရေးဒင်းပလက်ဖောင်းကနေအကောင်းဆုံးအခမဲ့ Forex signal ရအောင်မည်သို့
MyDigiTrade သငျသညျအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူပေးပါသည် အခမဲ့သရုပ်ပြမှတ်ပုံတင်ရန် နှင့်ကို virtual-ပိုက်ဆံအကောင့်များနှင့် 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်သရုပ်ပြမုဒ်၌ဤဝန်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်။ အများစုမှာမှတ်သားဖွယ်, ထိုသရုပ်ပြအကောင့်လုံးဝအမှန်တကယ်ငွေအကောင့်တစ်ခုအပေါ်ကုန်သွယ်တက်ကြွလာသည်, ဒါကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဝန်ဆောင်မှု၏အလုပ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်အကဲဖြတ်ကြောင့်စစ်မှန်သောငှ၏လိုအပ်မှုမရှိဘဲလုပ်ကိုင်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
စမ်းသပ် mode မှာကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကူးယူရန်သင့် MyDigiTrade သရုပ်ပြ account တစ်ခု register ဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ:
တစ်သရုပ်ပြအကောင့်ကိုဖွင့် - ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
သင့်ရဲ့ကနဦးလက်ကျန်ငွေ (သရုပ်ပြအကောင့်) ကိုရွေးချယ်ပါ, ငွေကြေးနှင့်သြဇာအကောင့်
ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကို select တစ်ခုအစုစု wizard ကိုသုံးပါ: အဆိုပါအစုစု wizard ကိုသငျသညျကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာပေးထားပါတယ်။ သင်ကစာရင်းထဲကသူတို့ထဲကတချို့ဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်သင့်အစုစုကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သို့မဟုတ်သင်လုံးဝဒီအဆင့်ကိုကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။
MyDigiTrade ပလက်ဖောင်းမှကြိုဆိုပါသည်: သင်ကအီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျထဲမှာ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပဲ!
သငျသညျပြီးသားမဟာဗျူဟာများကဆက်ပြောသည်လျှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်ကုန်သည်များ၎င်းတို့၏အကောင့်အသစ်အရောင်းအဖွင့်လှစ်မစတင်မှီတိုငျအောငျစောငျ့ဆိုငျးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ဤခြေလှမ်းကျော်သွားကြလျှင်, သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုအချို့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, MyDigiTrade နောက်လိုက်သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံကျော်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ပေးသောအလွန်အမြတ်အစွန်းမိတ္တူကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအပိုဆောင်း variable တွေကိုအများကြီးထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့အပွငျအောကျပါရသောအခါ အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများသငျသညျအမြင့်ဆုံး slippage, ထုံးစံရပ်နား-အရှုံးသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသို့မဟုတ်ပင်ပြောင်းပြန်ကုန်သွယ်များအတွက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်အားလုံးအရောင်းတစ် signal ကိုပံ့ပိုးပေးသူ၏အရောင်းအဖို့ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်အတွက်ကူးယူပါလိမ့်မည်။ ပြောင်းပြန်ကုန်သွယ်သာဒီ list ထဲတွင်ရှာတွေ့မှတကယ်ခက်နေသောမကောင်းတဲ့မဟာဗျူဟာများ, အဘို့အသိစေသည်။ ကျနော်တို့ကသုံးပြီးအကြံပြုကြပါဘူး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ add ဖို့မန့်သတ်ချက်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ရှိပါတယ် အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများ သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကိုရန်။ ဒီပလက်ဖောင်းသင်သည်အရောင်းအပုံတူများအတွက်ကြိုက်နှစ်သက်မဆို setting များကိုသတ်မှတ်ခြင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်, သင်သည်သင်၏လက်ရှိချိန်ခွင်လျှာတစ် fixed ကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အချိုးအစားဖြစ်စေရှေးခယျြနိုငျသညျ။
တစ်ခုချင်းစီကို setting ကိုအကြံပေးချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, သင်အလွယ်တကူအကောင်းဆုံးကိုသင်ကိုက်ညီသောအရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
MyDigiTrade ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း copy မည်သည့် browser ကနေလက်လှမ်းသည်နှင့်တကယ့်အချိန် mode မှာအားလုံးအရောင်းအခြေရာခံခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါကွန်နက်ရှင်ဒီပလက်ဖောင်းအားလုံးလက်ရှိအရောင်းအကိုခြေရာခံများနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေသည်စသည်တို့ကို, သင်၏အကောင့် status ကိုဒေတာလဲလှယ်ခွင့်ပြုကုန်သွယ်မှု။
သငျသညျပံ့ပိုးပေးသင့်အကောင့်ထဲမှာထိပ်ပိုင်းရာထူးယူသောအရာကိုမဟာဗျူဟာဒါမှမဟုတ်သူတို့ဝင်ငွေဘယ်လောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲသည့်ချိတ်ဆက်မဟာဗျူဟာအချို့အရောင်းအပိတ်ဖို့နိုင်ပါတယ်။ အကန့်အသတ်မရှိ!
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမှာခြွင်းချက်ဖြစ်ပါသည် MyDigiTrade။ သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်း algo ကုန်သွယ်စီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီများ, တစ်ဦးချင်းကုန်သည်များနှင့်အခြားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။
အခမဲ့သရုပ်ပြခြင်းနှင့်ကို virtual-ပိုက်ဆံအကောင့် Register နှင့် 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်သရုပ်ပြမုဒ်၌ဤဝန်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်!
အဆိုပါတရားဝင် MyDigiTrade က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု - တစ် Pro ကိုတူ Forex ဈေးကွက်ကုန်သွယ်မှု!